ငါး dehydrator စက် - Twesix
ငါး dehydrator စက်
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ငါး dehydrator စက်.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Twesix.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Twesix.
ထုတ်ကုန် nontoxic နှင့်အပြစ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမခဲ, Formaldehyde, ဒါမှမဟုတ်ပါရှိသောသည်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောတ္ထုများနှင့်တကွ, ပစ္စည်းစမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်သည် ငါး dehydrator စက်.ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခွင့်များကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။
ဂေါ်ဖီထုပ်ဓာတ်ဖြည့်စက်သည်ခြောက်သွေ့မှုဖြစ်စဉ်၏ထိရောက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးအရည်အသွေးကိုအာမခံသည်။ဂေါ်ဖီထုပ်, အချပ်ပြီးတော့ခြောက်သွေ့ပါ။ သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန် ၆၅ ဒီဂရီ၊ ၄ နာရီအကြာတွင်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စက်ပစ္စည်းများရေခန်းခြောက်ပြီးနောက်ခြောက်သွေ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်
အိမ်နှင့်ခြံများအတွက် 100kg စီးပွားဖြစ်သစ်သီးဖျော်စက်အစားအစာခန်းခြောက်စက် TXS024
ဓာတ်ပေါင်းဖို ၂၄ လုံးပါသောအစားအစာခန်းခြောက်စက်ရုံသည်ဟိုတယ်၊ လယ်ယာနှင့်စက်ရုံများကဲ့သို့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၄၀-၉၀ ဒီဂရီအပူချိန် ရှိ၍ အခြောက်ခံစက်သည်အသား၊ ငါး၊ မှို၊ သရက်သီး၊အချို့သောဖောက်သည်များ၌ခွေးနှင့်ကြောင်ကဲ့သို့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များရှိသည်၊ သူတို့အတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များခြောက်သွေ့စေသည်။အဆိုပါစက်သည်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကက်ဘိနက်လေမှုတ်စက်ဖြစ်ပြီးအစားအစာလုံခြုံမှုကိုအာမခံသည်။ ၀ တ်ဆင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စက်သည် Wheather ၏လွှမ်းမိုးမှုမရှိဘဲ ၂၄ နာရီအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။အစားအသောက်ခြောက်စက်သည်အပူချိန်နှင့်ခြောက်သွေ့ချိန်ကိုအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်သောဒစ်ဂျစ်တယ်ခလုတ်နှင့် timer ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။Twesix HighQuality ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်စီးပွားဖြစ်သစ်သီးဖျော်ရည်စက်နှင့်အိမ်နှင့်ခြံများအတွက်အစားအသောက်ခြောက်သွေ့စက် TXS024 လက်ကား - Foshan Shunde Twesix စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်အစားအစာခြောက်သွေ့စက်တွင် (၁၀) နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသည်။